Kuqikelelwa ukuba iApple ithengise ngaphezulu kwe-3,9 yezigidi ze-Apple Watch kwiQ3 | Ndisuka mac
Kuqikelelwa ukuba iApple ithengise ngaphezulu kwe-3,9 yezigidi ze-Apple Watch kwi-Q3
U-Apple akaze axele ngenani leewotshi azithengisayo. Ngumbuzo esizibuza wona kwigama ngalinye eliphambili, xa bezisa into entsha ngokunxulumene newotshi yeApple. Siyazi ukuba namhlanje yenye yeewotshi ezithengisa kakhulu kwihlabathi liphela, kodwa asinayo idatha yamanani, ebonelelwe yinkampani. Ubuncinci, kupapasho lwayo lokugqibela lweziphumo, yabonelela ngedatha ehambelana nayo: inkampani ithengise iiwotshi ezingama-50% ngaphezulu, xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Namhlanje sifundile kwisandla senkampani yohlalutyo Canalys, ukuba ukuthengisa bekuya kufikelela kwi-3,9 yezigidi zeewotshi kwikota yesithathu.
Kuyabonakala ukuba eli lixesha lokuqala okoko kwasungulwa iApple Watch ukuba, ibango lidlulile kunikezelo. Kwelinye icala, abaqhubi bamangalisiwe ngokunxulumene nezicelo zabaxumi babo malunga nokuba baya kuyinika na inkonzo ye-LTE kwi-Apple Watch. Khumbula ukuba uthotho lwe-Apple Watch 3 LTE lunokunxibelelana nenethiwekhi ngaphandle kokuxhomekeka kwi-iPhone, okoko nje sinesiSIM ebonakalayo. Ngokwamahemuhemu amva nje, le nkonzo izakufika eSpain ukusuka ngoJanuwari 2018.
Uqikelelo lukaCanalis lubonisa ukuba ezinye Abasebenzisi abangama-800.000 ngebakhethe imodeli ye-LTE. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba ikota yesithathu igubungela uJulayi, uAgasti noSeptemba kunye neApple Watch series 3, eqale ukuthengiswa ngoSeptemba, ibonisa ukutsalwa kwemodeli yewotshi yeApple.
Uthotho 3 uqikelelo lwentengiso lubangcono. Ukuthengiswa kwewotshi e-China akukakaqali, njengoko urhulumente welizwe evotela inkonzo ye-LTE yeApple Watch. Kwelinye icala, ikota yokugqibela yonyaka ibisoloko intle kakhulu kwintengiso yeApple Watch. Njengoko ulindelo kuthotho 3 luphezulu kunoluhlu 2, yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba uthotho 3 lulindele ukumiliselwa ngamandla kwiinyanga ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Kuqikelelwa ukuba iApple ithengise ngaphezulu kwe-3,9 yezigidi ze-Apple Watch kwi-Q3
Ngoku kwiMicromanagement unesipho esiqinisekileyo sokuthenga iMac
Iziko ledatha laseIreland alinakwakhiwa